ညီလင်းသစ်: သားနဲ့ နှင်းလျှောစီးသင်တန်း
Posted by ညီလင်းသစ် au 21.1.11
သားနှင်းလျှောစီးတာကို အနားကနေသွားကြည့်ချင်တယ်...။ ပထမဆုံးပုံထဲမှာ သားကတကယ့် Professional လိုဘဲ.. =)။ အောက်ဆုံးက စကိတ်စီးနေတဲ့ပုံလေးအကြိုက်ဆုံးဘဲ..။
Brother ဇာတ်ကားထဲက နှင်းလျှောစီးတာသွားသတိရမိတယ်
အောက်ဆုံးက ပုံလေးကို အချစ်ဆုံးပဲ လက်ကလေးကိုကား ခြေထောက်အနေထားလေးနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေးကျနေတာပဲး)
သားလေးက ကိုင်ပေါက်ချင်စရာလေး.. အသည်းယားတယ်.. :D
ကျမကတော့ အခုထိ မစီးတတ်ဘူး။
ဒီကကလေးတွေကတော့ နှင်းနဲ့ skiနဲ့ အတူကြီး
လာတော့ သူတို့ အတွက်ပျော်စရာကြီးနော်။
သားလေးနဲ့ မအိမ်သူကို နှုတ်ဆက်ပေးပါအုံးနော်။
ချစ်စ၇ာကောင်းတဲ့ခလေးကို ပိုပြီးချစ်စရာကောင်းအောင် ရေးတတ်တယ် ... ကျမတို့မိသားစုတော့ တခါမှကို နှင်းလျောစီး မရောက်ဖူးသေးဘူး .. အမျိုးသားက မကြိုက်တော့ ကိုယ်လည်း မရောက်ဖြစ်ဘူး ..
ကျေးဇူးပါပဲ... ... ...၊
သူကဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ စီးဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး :) ski ဝတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ဖြစ်တာက ခပ်များများပါ..၊
အခွင့်ကြုံရင်တော့ စမ်းသာစမ်းဗျို့၊ ပျော်ဖို့ကောင်း ပါတယ်...၊
အဲဒီ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံလည်း ရိုက်ပြီးရော လဲတော့တာပဲ...၊ :)
ကြည့်စမ်း..ဘယ်တုန်းကတည်းက ဂျူဒို သင်ထားတာ လဲ? မဖြစ်ဘူး...နောက်ဆို ဆင်ခြင်မှ... :D
ကလေးတွေကတော့ ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အတတ်မြန်ကြ တာပါပဲ..၊ နှုတ်ခွန်းဆက်လွှာကို ပါးလိုက်ပါပြီဗျား..၊း)
တကယ်စီးချင်ရင် လွယ်ပါတယ်၊ ski စီးပြီးကြရင် After ski လို့ခေါ်တဲ့ activity တစ်ခုရှိတယ်၊ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘားကိုသွားပြီး တနေကုန် ပင်ပန်းထားတာကို ပြေပျောက်အောင် တခုခု သွားသောက်တာပါ..း)၊ Alcoholic မှမဟုတ်ပါဘူး၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် ကြိုက်တာ သောက်ကြတာပဲ၊ ဒီတော့ အမျိုးသားကို After ski ပို့ပြီး ကိုယ်က ski စီးလို့ ဖြစ်ပြီပေါ့...ဟုတ်? :D
ဟယ် သူတောင် ကိုယ့်ထက်အရင်စီးတတ်သွားပါရော့လား :)
နန်းညီ ကော်မန့်ကို ဖတ်မိတော့ အသံထွက်ပြီး ရယ်လိုက်မိတယ်... ဟုတ်ပါရဲ့... သူပြောလဲ ပြောချင်စရာ... အသည်းယားစရာလေးကိုး...း))
ဟင့်အင်း..မစီးတတ်သေးဘူးဗျ၊ အခုမှ လမ်းလျှောက် တုန်း...အဟဲ၊
ကျေးဇူးအမ..၊ ဟုတ်တယ် နန်းညီက အဲဒါမျိုးလေးတွေ ပြောတတ်တယ်...တကယ်၊ :D
ကလေးတောင် စီးတတ်တယ်။ ညီမတော့ ဘာမှမတတ် ဟိး.. ။